Abarhwebi bearhente eThebu, eCebu
Uluhlu lweeNtengiso zePropathi: Isiqondisi seArhente yeZindlu Abarhwebi bezindlu kunye nabarhwebi Cebu Cebu
I-Cebu (; i-Cebuano: i-Sugbu) yiphondo lePhilippines elikwi-Central Visayas (Region VII) kwingingqi, kwaye inesiqithi esikhulu kunye ne-167 ejikeleze iziqithi kunye neziqithi. Idolophu enkulu yaso sisiXeko saseCebu, isixeko esidala kunye nedolophu yokuqala yePhilippines, esizimeleyo kwezopolitiko kurhulumente wephondo. Indawo ye-Cebu Metropolitan okanye iMetro Cebu yenziwa ziidolophu ezingabamelwane ze-7 (iSixeko seCarcar, isiXeko i-Cebu, isiXeko saseDanao, Isixeko saseLapu-Lapu, Isixeko saseMandaue, isiXeko saseNaga, kunye nesiXeko saseTalisay) kunye nomasipala wase6 (iCostostela, iConsolacion, iCordova, iLiloan, IMinglanilla, kunye neSan Fernando). I-Cebu lelinye lawona maphondo aphuhlileyo kwiiPhilippines apho iMetro Cebu yindawo yesibini yedolophu enkulu kwiPhilippines (emva kweMetro Manila) kunye neCebu City njengeziko eliphambili lezorhwebo, urhwebo, ezemfundo kunye nomzi mveliso kwiiVisayas. Kwisithuba seminyaka elishumi itshintshe yaba yindawo yehlabathi yokuqhubela phambili iinkonzo zeshishini, ukhenketho, ukuthunyelwa, ukwenziwa kwefanitshala, kunye nomzi mveliso onzima. Isikhululo senqwelomoya saseMactan-Cebu, esikwiSiqithi seMactan, sesona sikhululo seenqwelomoya esisesona siphambili kwiiPhilippines.